June | 2017 | Radio Himilo
radio himilo June 22, 2017	Features, Wararka Leave a comment 123 Views
Muqdisho – Markii ugu horraysay taniyo markii la aas’aasay idaacadda Himilo ee magaalada Muqdisho, waxaa maanta ay qabatay xaflad tartan xiritaan oo loo qabtay arday gaaraysa 30 kuwaas oo ku tartamay 114 Qur’anka. Tanina waa natiijada ka dhalatay dhowr 10 ...
radio himilo June 22, 2017	Features, Wararka Leave a comment 104 Views
Muqdisho – Dhawaan ayaa Buugga Guinness World Record wuxuu Dr. Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji u aqoonsaday hoyga shinbiraha. Ma ahan ururiye kaas oo ku raaxaysta isu keenista haadda xurriyo duulaysa, hayeeshe waa naxariisle samata-bixiya shinbiraha dabargo’aya, dhaawacan ama laga haajiray ...
Angel Di Maria oo lagu xukumayo bixinta canshuur uu gacan bidixeeyey xilligii Spain.
radio himilo June 22, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 73 Views
Muqdisho – Xiddiga Paris Saint-Germain, Angel di Maria ayaa la ganaaxay €2m (£1.76m) kadib markii uu qirtay in tiro laba jeer uu ku kacay wax is daba marin dhanka canshuurta la xiriirta. Laacibkii hore Man United ayaa sidoo kale lagu riday xabsi hal ...
Cassano: “Donnarumma ma diidi karo dalab uga yimaada Madrid.”
radio himilo June 22, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 50 Views
Muqdisho – Goolhayaha AC Milan, Gianluigi Donnarumma maya kuma dhihi karo kooxda Real Madrid haddii ay doonto inay la saxiixato, marka loo eego Antonio Cassano. Real ayaa kamid ah kooxaha lagu soo waramayo inay xiisaynayaan laacibka, kadib markii uu iska diiday inuu ...
Munich oo laalaysa isku day kasta oo lagula saxiixan karo Lewandowski.
radio himilo June 22, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 64 Views
Muqdisho – Bayern Munich ayaa soo saartay war ay ku sheeegeyso in xiddiga Robert Lewandowski aan idmi doonin inuu ka tago kooxda. Laacibka qaran Poland ayaa lala xiriirinayay kooxaha Manchester United iyo Chelsea kadib markii uu si cad u tilmaamay inuu ku ...
radio himilo June 21, 2017	Features, Wararka Leave a comment 78 Views
Muqdisho – Duni rabshaduhu ay kumaankun qoysas ah ku qasbaan inay barakacaan maalin walba, hadda waa waqtigii la tusi lahaa sida loo garab istaagi karo. Si tan loo hir-geliyo, hey’adda QM u qaabilsan qaxootiga ayaa bilowday ol’ole loogu magac daray ...
Mihajlovic: “Donnarumma waa inuu joogaa AC Milan.”
radio himilo June 21, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 57 Views
Muqdisho – Sinisa Mihajlovic ayaa rumeysan in goolhayaha da’yarka Gianluigi Donnarumma ay ku fiican tahay inuu ku nagaado kuna kobciyo xirfaddiisa kooxda AC Milan. Donnarumma, oo 18 jir ah ayaa ka caraysiiyay taageerayaasha Milan kadib markii shaaca laga qaaday inuusan heshiiskiisa kordhin ...